I-F1 Spirit Remake: umdlalo omnandi wokugijima | Kusuka kuLinux
F1 Ukuvuselelwa Komoya ngumdlalo wokugijima omnandi weLinux yize uhambisana namanye amapulatifomu. Ifomethi yangempela yomdlalo yenziwa ethandwa ku amashumi ayisishiyagalombili kuma-consoles ehlukene wevidiyo.
Amandla ayo womdlalo ayaqhubeka nokufana futhi agcina ukuzijabulisa kuphelele. Kodwa-ke, ukuqedwa komdlalo kuye kwahlelwa kabusha ukuvumelanisa ikhwalithi yezithombe nobuchwepheshe be-2D, yize kungenakuqhathaniswa namandla eminye imidlalo yamavidiyo yohlobo lomjaho.
Izinto eziguquguqukayo zomdlalo ziqukethe ukuqedela amasekethe ahlukene ukudlula ileveli. Imoto ingakhethwa ezinhlobonhlobo zemibala nemibala, ezinye izindlela ezitholakalayo yi-F3, F3000, umjaho wokubekezela kanye nefomula 1 yakudala.
Ngaphezu kwamamodeli ezimoto eziyisithupha ezilungele ukushayela, i-F1 Spirit Remake inezinhlobo eziningi zemidlalo kanye nekhono lokwakha imoto yakho futhi uyihlele ngendlela oyifunayo. Njengoba amazinga eseqiwe sizokwazi ukufinyelela ezigabeni eziningi futhi ezingcono ngokuzivula ngesikhathi somdlalo.
Landa i-F1 Spirit Remake
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » I-F1 Spirit Remake: umdlalo omnandi wokujaha
cesar alonso kusho
Yebo, ngicabanga ukuthi ngizokwazi ukuqeda ngaphambi kuka-54 esigabeni sokuziqeqesha unyaka wonke (okungenani ngiyathembisa ukuthi ngizozama)
Phendula ku-cesar alonso
Angikwazanga ukuyihlanganisa: /
Faka yonke imitapo yolwazi edingekayo bese ngithola iphutha elilandelayo:
/ usr / bin / ld: Qaphela: 'atan2 @@ GLIBC_2.0' ichazwa ku-DSO /lib/libm.so. 6 ngakho-ke zama ukuyifaka kulayini womyalo wokuxhumanisa
/lib/libm.so.6: ayikwazanga ukufunda izimpawu: Ukusebenza okungavumelekile
yenza: *** [f1spirit] Iphutha 1
Noma yimuphi umbono ukuthi kwenzekani 🙁?
Kutholwe iTroll ...
Umdlalo we-Shit, eLinux akusoze kwaba nemidlalo emihle engeyona iWindows ..
UKoldo Rivas kusho
Umdlalo omuhle, wamthumela kwi-MSX. 😀
Phendula uKoldo Rivas
Ha, che enhle kakhulu, ngokwengeziwe kimi ukuthi ngihamba nemidlalo ye-retro, ngaphandle kwe-10 ngizozama
ICinnamon: Isiphakamiso esithandekayo sedeskithophu yesikhathi esizayo